Dagaal dib uga qarxay deegaanka Dukaraq - Muqdisho Online
Home Wararka Dagaal dib uga qarxay deegaanka Dukaraq
Sida ay sheegayaa wararka ka imaanaya degaanka Dukaraq dagaal u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa xalay ka dhacay degaanka Tukaraq ee Gobolka Sool sida ay soo sheegayan dadka ku nool tuuladaasi.
Waxaa sidoo la sheegayaa in dagaalka oo socday in ka badan hal saac uu ka dhashay khasaare kala duwan oo labada dhinacba gaaray inkastoo aan weli faahfaahin laga hayn maadaama ay adagtahay in labada dhinacba xog laga helo.
Sarkaal ka mida saraakiishii ka qaybgashay dagaalka ayaa sheegay in labada dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan qoryaha garabka laga rido. Waxa kaloo ay wateen ookiyaalaha habeenkii wax lagu arko ay gebi ahaanba gubeen taliska ciidamada Somaliland ee buurta “Laba-madaxleey” balse wuxuu diiday in uu ka hadlo khasaaraha dhankooda gaaray.
Ma jirto wali cid ka hadashay khasaaraha ka dhashay dagaalkii xalay oo dadka degaanka ay ku tilmaameen midkii ugu cuslaa ee dhexmara jabadda Khaatumo iyo ciidamada Somaliland marka loo eego hubka culus ee halkaasi ka dhacayey habeenkii xalay.
Previous articleHowlgalo qorsheysan oo laga fuliyay Gobolka Jubadda Hoose
Next articleMW K/G Puntland Axmad Karaash oo booqday degaanka Af-urur (Sawiro)